Gobolada Bari iyo Haylaan oo Boorsooyinkoodii ka qaatay Koobka gobolada Puntland – SBC
Gobolada Bari iyo Haylaan oo Boorsooyinkoodii ka qaatay Koobka gobolada Puntland
Ciyaaro aad u xiiso badan islamarkaana ka tirsan koobka gobolada Puntland ayaa galabta dhacay waxaana galabta wada ciyaarayay gobolada Bari Vs Karkaar, iyo Haylaan Vs Nugaal.
Ciyaarahan oo ahaa kuwo aad u xiiso badan islamarkaana ay ka soo qeyb galeen dadweyne aad u tiro badan ayaa maanta waxaa ka soo baxay natiijooyin dadka qaarkiina ay ku farxeen kuwo kalena ay ka niyad jabeen.
Ciyaartii hore ee galabta waxay dhexmartay gobolada Bari Vs Karkaar waxayna ku soo dhamaatay guushiina ay raacday gobolka Karkaar oo 1 gool oo qura kaga raayay gobolka Bari Waxaana sidaasi ku huleelay gobolka Bari .
Waxaa sidoo kale dhacday ciyaarta u dhexeysa gobolada Haylaan Vs Nugaal taasina waxay ku soo dhamaatay 4-2 oo ay guushu ku raacday gobolka Nugaal.
aad iyo aad ayaan waxaan marka hore ugu hanbalaynayaa Gobaladda puntland dhanka ciyaarahaa marka xigta waxaan tacsi u dirayaa Gobalka Bari oo aan ka mid ah Taageerayashoodda oo labadii kulan ba laga badshay marka xigta waxaan Guul uu rajayn Gobalka Mudug Xulka Ka Socoddaha ee Xiligaan Usoi Baxay Sman Finalka by
siciid jaamac cali says:
waxaan kaxumahay badinta laga badiyey